शक्तिशाली राष्ट्रपति पुटिनलाई भेट्न अगाडि बस्नुपर्छ क्वारेन्टिन! - हाम्रो देश
शक्तिशाली राष्ट्रपति पुटिनलाई भेट्न अगाडि बस्नुपर्छ क्वारेन्टिन!
कोरोना भाइरसको प्रकोप सुरुवात भएयता रुसका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनको सुरक्षाको लागि हर सम्भव प्रयास गरिएको छ।
शक्तिशाली पुटिनलाई कोरोनाबाट जोगाउन रुसी अधिकारीहरुले क्वारेन्टिनको असाधारण उपाय अपनाएको बीबीसीले जनाएको छ।
यो उपाय अनुसार सयौं सरकारी अधिकारीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको बताइएको छ।
कोरोना महामारीयता कोरोनाबाट सुरक्षित मानिसले मात्र पुटिनसँग भेटेका छन्। पुटिनसँग भेट्ने अगाडि सबै मानिसले क्वारेन्टिनको नियम अपनाएको बताइएको छ।
सन् २०२० को मार्चमा पुटिनले विमानबाट भ्रमण गर्ने कार्यक्रम थियो। सो भ्रमण अगाडि चालक दलका सदस्य, सरकारी अधिकारीसहित ६० जनालाई १४ दिन क्वारेन्टिन राखिएको थियो।
त्यति मात्र नभएर पुटिनसँग भेट्न खोज्ने र पुटिनले भ्रमण गर्न लागेका स्वास्थ्यकर्मी, ड्राइभर, सरकारी अधिकारी, होटलका कर्मचारीलाई पनि क्वारेन्टिन राखिएको थियो।
यो सबैको उद्देश्य थियो पुटिनलाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु।
रुसमा हालै नयाँ कानुन बनेको छ। सो कानुनअनुसार पुटिनले अझै १६ वर्षसम्म सत्ताको नेतृत्वमा रहिरहन सक्छन्।
योसँगै पुटिन रुसका तानाशाह जोसेफ स्टालिनभन्दा लामो समयसम्म सत्तामा रहने शक्तिशाली राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना बढेको छ।
पुटिन पहिलोपटक सन् २००० मा राष्ट्रपति बनेका थिए। उनले दुईपटक चार–चार वर्षका कार्यकाल पूरा गरेका थिए। त्यसपछि उनका सहयोगी दिमित्री मेदेवदेव सन् २००८ मा राष्ट्रपति बनेका थिए।
सन् २०१२ मा पुटिन पुनः सत्तामा आएका हुन् र २०१८ मा पनि उनले विजय हासिल गरेका थिए।